Kacha mma SEBI Regulated Brokas | Full Mụta 2 Trade Guide March 2021
Best SEBI Brokas debanyere aha 2021 - Mụta ahia 2
Seclọ ọrụ nchekwa na mgbanwe nke India (SEBI) amụrụ na azụ Iwu nke nzuko omeiwu ma ọ bụ ngalaba na-achịkwa maka oghere ego na India.
N'ihe banyere ịzụ ahịa azụmaahịa na India, a na-ewere ya dị ka mmejọ na-enweghị ike ịbelata n'okpuru iwu FEMA - nke ahụ bụ belụsọ ma ego isi na ụzọ ahụ bụ Rupee (nke ọ bụ iwu).
Asịrị na-egosi na enwere mgbanwe ego n'akụkụ akuku, na Bank of Reserve nke India (RBI) ka edoziri ka ọ gbanwee oke ya. Dị ka ọ na-anọchi enweghị mgbanwe ọ bụla e mejuputara, ya mere ịzụ ahịa abụọ ka bụ iwu na-akwadoghị (dị ka ọnụ ọgụgụ dị nta nke mba ndị ọzọ).
N’iburu nke a n’uche, ndị na-ere ahịa SEBI nwere aha ọma adịghị mfe ịchọta. N'otu aka ahụ, ụfọdụ ndị ahịa na-agbasi mbọ ike ịchọta onye na-ere ahịa nke mmiri nke na-anabata ndị na-achụ ego India.
O sina dị, anyị ahụla 5 kacha mma SEBI broka maka ntụle gị. Anyị ga-enwetakwa ụfọdụ ozi bara uru banyere ihe ị ga-ele anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-atụkwasị obi na ntụkwasị obi yana otu esi edebanye aha.
Gịnị bụ SEBI?
Ka ọ na-erule mmalite 1980s, ndị ọrụ banki dodgy nọ na-emebi iwu na ndị ahịa tara ahụhụ. Ọzọkwa, ndị na-ere ahịa banyere ahịa anaghị emegide ire ahịa dị elu na mgbanwe ngwaahịa. Nke a mere ka enweghi ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na oghere ego.
Tupu Iwu SEBI, 1992, ọ bụ CCI (Controller of Capital Issues) nke na-achịkwa ahịa ego India, ebe Isi Okwu Issues nke 1947 na-achịkwa ohere itinye ego. Emeputara ọganiru na 1992 na SEBI ka emepụtara dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka usoro iwu na-achịkwa iwu - tụkwasịrị obi ịhazi ahịa ahịa ego nke India.
Na nkenke, ahụ a na-achịkwa ọrụ ego, ndị ahịa ahịa, na ndị na-etinye ego. N’uzo, aru a na aru oru dika ihe nchebe site n’itinye iwu na usoro ichoro ka edegara akwukwo ozi a. Ebumnuche ahụ bụ ịmepụta ahịa ọhụụ maka ndị ahịa - yana ijide ndị na-ere ahịa ka ha zaa ajụjụ maka mmejọ ọ bụla ma ọ bụ ghara ịgbaso ụkpụrụ omume atọrọ.
Kedu ka ndị na-ere ahịa si enweta ihu ọma site na SEBI?
Dịka anyị kwurula, ahụ na-ahụ omume ego na ahịa nchekwa ma chebe gị dị ka onye na-etinye ego site na itinye iwu na ụkpụrụ siri ike.
Enwere ndepụta nke iwu nke ndị na-ere akwụkwọ ikike niile ga-agbaso, otu ụkpụrụ ahụ na-anọchi anya FCA, ASIC, CySEC na ọtụtụ usoro iwu ndị ọzọ. Emechakwa, ebumnuche bụ isi bụ ime ka ahịa ego ka mma. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịkwalite ọtụtụ nyocha zuru ezu, iche ndị ahịa iche, ma gafee nyocha ọhụụ.
Anyị edekọtara nkọwa dị mkpirikpi n'okpuru ụfọdụ isi ihe chọrọ usoro nchịkwa dị ka SEBI nwere na ndị na-ere ahịa
Usoro itinye n'ọrụ
Ndị na-ere ahịa na-achịkwa iwu kwesịrị igosi nghọta doro anya nke ịdị uchu na akụkọ zuru ezu. Nke a kwesịrị ịmalite akụkụ nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na onye ahịa si na itinye ego kwuo $ 1,000 kwa ọnwa kalenda, na $ 30,000 - onye na-ere ahịa kwesịrị ịchọpụta ebe ego ahụ si wee depụta otu akụkọ gbasara usoro iwu dị mkpa.
Ndị na-ere ahịa edepụtara nke na-agbasoghị iwu KYC (Mara Onye Ahịa Gị) ga-akwụ nra. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ụlọ ọrụ ọ bụla na-enye ọrụ ego ga-ekwenye na onye ọ bụla na-azụ ahịa dịka iwu KYC si dị.
Nzọụkwụ 4 nke KYC maka onye na-ere ahịa bụ:
Inweta aha, adreesị na foto ID nke ọ bụla ahịa
Na-ekwenye na ozi ndị ahịa ahụ ziri ezi / ha bụ ndị ha kwuru na ha bụ
Nweta nghọta banyere ọnọdụ ego nke ndị ahịa
Lelee mbọ ahịa ndị ahịa na-agba
Anyị niile agabigala KYC mgbe anyị na-abanye saịtị na mbụ, mana ikekwe ị maghị na ọ bụ iwu chọrọ. Iwu niile dị na ndepụta a na-enyere aka ịmepụta ebe nchekwa na nchekwa doro anya maka anyị niile.
Nkewa Akaụntụ Ndị Ahịa
Ebe nchekwa nke ụlọ akụ / ego ejirila ihe dị ka afọ iri anọ, ọ bụkwa iwu ọzọ ịgbaso. N’ụzọ dị oke mkpa, ụlọ ọrụ na-ere ahịa ga-edozi akụkọ kwa ọnwa iji kwado ya.
Isi okwu bụ, ndị na-ere ahịa ga-etinye isi obodo gị na akaụntụ dị iche na akaụntụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a pụtara, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-apụ azụmaahịa, enweghị ike iwere ego gị dị ka ụgwọ ma chebe ya pụọ ​​na mpụ ego.
N’oge na-adịbeghị anya, SEBI webatara sistemu ọzọ iji lụsoo mmejọ nke nchekwa ndị ahịa. Usoro a dabere na ntanetị ma na-ejide nkọwa nke ndị ahịa na nchekwa na ebe ejidere ha.
Ọbụghị naanị nke ahụ, mana sistemụ ahụ ga-agụnye nchekwa nke ego, mgbanwe na ụlọ ọrụ gbakọtara gbasara azụmaahịa niile. SEBI wee nwee ike iji data tụnyere nke akaụntụ ahụ emegharịrị na ngosipụta nke data sitere na ndị na-agbanwe agbanwe n'echi ya.
Oditi Kwa Afọ
Ndị na-ere ahịa SEBI nwere iwu kwadoro itinye akwụkwọ nyocha kwa afọ. Rịba ama, ndị na-achịkwa na-arụkwa nyocha ọ bụla na-enweghị usoro ma nwee ike ịchọ ịhụ ụfọdụ ozi ndị na-esonụ na okpu okpu:
Nkọwa nke ego ego niile gbanwere (gụnyere olu)
Nnata nke akụ klas
Nbibi zuru ezu nke ụgwọ
Nkọwa doro anya banyere leverage ọ bụla eji ma nye
Iche dị iche n’etiti iwu onye ahịa na-egbu, na ndị nke ndị na-ere ahịa na-egbu
Mgbe achoputara na nyocha ezughi ezu (ozi na-efu) mgbe ahụ ndị a ga-ahụ ụlọ ọrụ a na-ekwu. Afọ ole na ole gara aga, mgbe nyochachara 3 afọ gara aga, SEBI chọpụtara na otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa na India na-enupụ isi n'iwu nchịkwa ya. A na-akwụ ụgwọ maka broshuọ ruru nde naịra 1.1 maka erubere isi ọ bụghị naanị AML, kamakwa KYC na nkewa ego.
Gini ka m nwere ike iji ahia ahia SEBI kwadoro?
Ndị na-ere ahịa niile dị iche iche ma a bịa n'ihe iche iche. N'ihi nke a, ọ bụrụ na enwere akụ ị chọrọ ilekwasị anya kpamkpam ị kwesịrị ịlele na onye na-ere ahịa na-enye ego ahụ. Fọdụ ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya naanị na cryptocurrencies dịka ọmụmaatụ, ebe ndị ọzọ nwere otu katalọgụ klaasị maka gị ka ị zụọ ahịa.
Iji nye gị mmụọ nsọ, anyị edepụtara ụfọdụ akụ enyere na ahịa eToro enyi na enyi India.
Ihe ndi mere eme taa metutara ahia ahia. Ihe kpatara ya, ha nwere ezigbo ihe nnọchianya nke ndụ - chee gold, silver, ike, na mmanụ.
Ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nnukwu ihe omume ụwa nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ahịa, dịka mmetụta dị na mmanụ mmanụ ụwa mgbe US wakporo Iraq na 2003.
E nwere ụzọ dị iche iche esi were ngwa ahịa, agbanyeghị, nke a na-ekewasị n'etiti 'ike' na 'nro'. N'ikwu okwu n'ozuzu, ihe ndị dị nro mejupụtara ihe na-eto. A na-akpọ ndị a mgbe ụfọdụ 'ngwaahịa nri na eriri' ma ọ bụ 'ngwaahịa ndị nwere ebe okpomọkụ'.
Lee ụfọdụ ihe atụ nke ngwaahịa dị nro:
A bịa n’ihe ndị siri ike, nke a na-ezokarị aka n’ihe ndị ọ dị mkpa ka e mepụta, ma ọ bụ gwuo.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ngwa ahịa siri ike:
Ebuka na Ekekọrịta Ndi ahia
Ego dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye ego na usoro ogologo oge. Ahịa a dị egwu dị ka ihe ọ bụla ga - emetụta ngwaahịa ọ bụla dịka mgbanwe na ọnụahịa, akụkọ, ngwaahịa ọhụrụ na ụlọ ọrụ na ntinye ego.
Nwere ike ịzụta ma ree mbak wee họrọ site n'ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ ụwa. Ihe atụ ole na ole nke ebuka ndị ahịa India na-ewu ewu bụ: GoPro, Ford, Apple, Amazon, Disney, Tesla na ọtụtụ puku ndị ọzọ.
Mgbe ị na-ere ahịa na India - imeghe ọnọdụ dị ogologo (ịzụta) na-enweghị leverage na-egosi itinye ego gị na ngwaahịa ahụ - yabụ a ga-azụta ihe ahụ n'aha gị. Mgbe ahụ enwere Fzụ ahịa CFD nke anyị ga-ekwu maka ya na-esote.
CFDs (Nkwekọrịta maka Ọdịiche)
Dịka ọmụmaatụ, ahia dị ka eToro, na-enye ndị India ohere iji CFDs. Nke a pụtara na ndị ahịa nwere ike imeghe ọnọdụ dị mkpirikpi (na-ere), na-eme ihe kachasị mma na n'ezie - na-emeghekwa ogologo ọnọdụ.
Biko rịba ama na ọ bụ ezie na RBI, a naghị ekwe ka ịre ihe mgbe ị na-eji broka SEBI. Agbanyeghị - yana dịka anyị tụlerela ugbua - ọtụtụ ndị ahịa Indian ga-eji nyiwe ndị a na-achịkwa n'ọdụ ụgbọ mmiri nke enyere ikikere na mba dị ka UK, EU, Australia, ma ọ bụ Singapore.
Imirikiti ndị India nụrụ banyere Bitcoin. E nwere n'ezie ihe karịrị 2,000 dị iche iche cryptocurrencies, na -emepụta ndị ọzọ kwa afọ.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ahịa azụmaahịa azụmaahịa dị na ndị India.
Ihe mkpuchi dị iche iche na-egosi oke mgbanwe ma nwee ike ịdị na-agbanwe ugboro abụọ na ọnụọgụ abụọ, n'otu ụbọchị ahia.
Ọzọkwa, ọ bụ ezi echiche ịmalite site na ịzụ ahịa cryptocurrencies na akaụntụ ngosi tupu itinye ego gị n'ihe egwu.
Ahịa ahia ọ bụla nwere 'ndeksi' ya, ma ọ bụ ọtụtụ 'indices' - ha niile na-egosipụta ọnọdụ nke ngalaba ahụ. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ejiri ihe dị iche iche mejupụta indices, a na-ewere ha dị ka ndị na-adịgide adịgide karịa ebuka dị iche.
Mgbe otu ụlọ ọrụ na-eme nke ọma, ọkachasị nke nwere ibu arọ karị, nke a nwere ike ibuli nghazi niile nke ndeksi ahụ. N'ebe ụfọdụ, dị ka eToro, a na-erere indices dị ka CFDs (lee anya n'elu) n'ihi na enweghị ike itinye ha na par say.
Ihe omuma atu nke akwukwo a ma ama bu S&P 500, FTSE 100, NASDAQ 100, na Dow Jones 30.
Iji zụọ ahịa na ụwa Forex ahịa, Ikwesiri inwe onye na-ere ahia n’azụ gị iji mee ya. Dị ka ị maara, na India ị nwere ike ịzụ ahịa naanị ụzọ abụọ nke gụnyere INR (Indian Rupee, .t
Ọmụmaatụ gụnyere: EUR / INR, USD / INR, JPY / INR na GBP / INR.
Na mbu, enwere ụdị ego ego 3 - exotics, majors, na umuaka. Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ụdị ọ bụla:
Exotic FX ụzọ abụọ: USD / HKD, AUD / MXN, NZD / SGD, EUR / TRY, GBP / ZAR na JPY / NOK
Isi FX abụọ: EUR / USD, USD / JPY, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD, GBP / USD, NZD / USD, na USD / CHF
Minor FX ụzọ abụọ: EUR / AUD, NZD / JPY, EUR / GBP, GBP / JPY, GBP / CAD, na CHF / JPY
Fọdụ ndị ahịa India na-eji e-wallets ka Skrill na Neteller nyefee ego na India. Platformslọ ọrụ ntanetị dị ka eToro ga-agbanwe ọtụtụ ego na dollar US iji zụọ ahịa dị ka ọkọlọtọ (nke a na-abịa na ego ngbanwe 0.5%).
Otu esi acho ezigbo ahia ahia nke SEBI
Dịka anyị metụrụ aka, iji jiri onye na-ere ahịa na ofesi, ị ga-ebu ụzọ gbaa mbọ hụ na ha achịkwala yana na ha nwere ikike iwu ịnabata ndị bi na India.
Enweghi 'SEBI broka' dị ka ndị a, mana enwere ndị na-azụ ahịa SEBI kwadoro nke nyere ndị India aka ịzụ ahịa site na obodo ha, n'ahịa gburugburu ụwa.
Ọ dịkwa mma iji hụ na ọ bụ opekata mpe otu ahụ dị ka FCA ma ọ bụ ASIC na-achịkwa azụmaahịa ahụ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta nchedo ego.
Dịka ọmụmaatụ, eToro - nke abụghị naanị otu n'ime usoro ntanetị kachasị ewu ewu na India, mana ụwa - bụ SEBI debanye aha ore ahia. Ọ bụ FCA, ASIC, na CySEC na-achịkwa ya.
Usoro ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-eweta ihe dị iche na uru ị ga-enweta. Emechakwa, ọ bụ kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa na-apụ apụ ka ịchọrọ ịtụle mgbe ị na-eme atụmatụ mmefu ego gị.
Iji nye gị echiche banyere otu esi akwụ ụgwọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ biko lee anya na atụ anyị n'okpuru:
Ka anyị were ya na ị na-ere ahịa USD / INR
Gị ore ebubo a ọrụ ego nke 0.6%
Ga -enweta $ 2,000
Na nke a dịruru ná njọ, ore ahia ga-ewe $ 12 ọrụ ($ 2,000 - 0.6% = $ 1988)
Ozi ọma ahụ bụ na anyị na-akwado naanị ndị na-ere ahịa SEBI (ma ọ bụ usoro nyiwe na-anabata ndị India) nke na-enye gị ohere ịzụ ahịa na-enweghị ọrụ.
Akụ ndị dịịrị gị
Ohere dị ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahia ọhụụ, ị nwere ike ịchọrọ itinye uche gị na otu ma ọ bụ akụ abụọ. Ka ị na-enwekwu ahụmahụ na ahịa, ị nwere ike ikpebi ịgbasa pọtụfoliyo gị. Iji mee nke ahụ, ịchọrọ ụdị akụ dị iche iche ịhọrọ site na.
Enweghị ndị na-ere ahịa abụọ bụ otu, yabụ ọ bụrụ naanị na ị nwere mmasị n'ezie ikwu Forex maka ọmụmaatụ, wee hụ na ndị na-ere ahịa na-enye ya. Ọzọkwa, anyị na-akwado ịhọrọ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ akụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanye mgbe e mesịrị ala.
Iji eToro dị ka ihe atụ - Ndị bi na India nwere ike itinye ma wepụ ego site na iji usoro ịkwụ ụgwọ ndị a:
Nyefe Bank mba ofesi
N’ụzọ dị oke mkpa, cheta na n’elu ikpo okwu dịka eToro ị ga-achọ itinye na USD, ya mere a ga-ebo gị ụgwọ obere ntụgharị nke 0.5%. Dịka anyị kwurula, ụfọdụ ndị ahịa India na-ahọrọ iji e-wallets ka Skrill ka ha wee ghara ịkwụ ụgwọ site n'aka ụlọ akụ ndị India.
Ọ bụghị naanị ụgwọ ọrụ nke nwere ike imetụta uru azụmaahịa gị, ebe mgbasa na-emekwa nnukwu ọdịiche. Maka ndị gị na-amaghị, ihe mgbasa nke ọ bụla akpan owo ẹwụtde iji 'pips'. Pips bụ ọdịiche dị n'etiti 'ịzụta' na ọnụahịa 'ree' nke ngwa ahịa a na-ekwu okwu ya.
Nke a bụ ihe atụ dị mfe nke etu esi egosi pipụ:
Ka anyi kwuo USD / INR nwere onu ahia ego nke 68.8000
Otu ụzọ nwere ọnụahịa ere nke 68.8004
Na nke a, USD / INR nwere mgbasa nke 4 pips, n'ihi na nke a na-anọchi anya ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ
Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịbawanye ego site na 4 pips iji mebie ọbụna
Ọzọkwa, anyị na-agbasakarị iso na ndị na-ere ahịa SEBI na-enye mgbasa dị egwu. Nke a na-eme ka o doo anya na ị ga-akwụ ụgwọ ahịa gị na opekempe.
Imirikiti nyiwe ahia nke India na-enye ndị ahịa nyocha ọrụ ntanetị dị ka akụkụ nke ọrụ ahụ. Nyocha teknụzụ na ọgụgụ eserese dị oke mkpa ma a bịa n'ịzụ ahịa nke ọma. Ngwaọrụ ndị ọzọ ka mma, ọkachasị maka ịzụ ahịa ego.
N’okpuru, anyị edepụtara ụfọdụ ngwa ọrụ kacha nyere aka maka ndị ahịa India taa:
Ọ nwere ike were ọtụtụ ọnwa iji mụta ka ndị ọrụ aka ọrụ si arụ ọrụ, yabụ ị ga-achọ ịrara oge dị ukwuu ịghọta azụmaahịa gị tupu itinye nnukwu ego isi nnukwu ego.
Ọ bụrụ n’ịbụ onye ọhụụ ma a bịa n’ahịa, ngwa akwụkwọ na ngwa ọrụ achọtara na weebụsaịtị ụfọdụ nwere ike ịbụ onye nzọpụta. Ndị ahịa nke ọkwa ọkwa niile na-a swearụ iyi site na data data dị ndụ, eserese na ngwa ọrụ mgbaàmà, yabụ ọ bụ ihe ezi uche dị na ịlele ọdịnaya agụmakwụkwọ maka gị.
Mara otu esi aghọta usoro ọnụahịa dị na akụkọ ihe mere eme na eserese eserese nwere ike inyere gị aka ịkọpụta mmetụta ahịa n'ọdịniihu - dịka ọnọdụ na-adịkarị ịlaghachi.
Ihe ọzọ enwere ike ịtụle dịka ngwa agụmakwụkwọ bụ akụkọ ngosi. Ha bụ ụzọ dị mma iji mụta ụdọ nke ọ bụla ahia n'ịntanetị ala.
Naanị cheta na ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa gị sitere na UK - ị ga-anọ 4 na ọkara elekere n'ihu. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa gị dabere na Washington, dịka ọmụmaatụ, ị ga-abụ elekere 9 na ọkara n'ihu.
N'ihi nke a, ọ ga-akara gị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na gị ore n'elu ikpo okwu na-enye a dịgasị iche iche nke ahịa nkwado ụzọ dị ka ndụ chat, email, ekwentị, na ihe na-na saịtị na kọntaktị ụdị. Otu ụlọ ọrụ nwere ngalaba Ajụjụ zuru oke nwekwara ike ịba uru ma ọ bụrụ na enyemaka adịghị 24/7.
Etu esi abanye na Broka SEBI
E nwere ihe dị ka 300 SEBI debanyere aha ụlọ ọrụ na India, mana ọ gaghị akwụsị ebe ahụ. A sị ka e kwuwe, usoro ntanetị kachasị n'ịntanetị na-adabere na mba ofesi.
Ọ bụrụ na ị ka na-achọ mmụọ nsọ mgbe ị na-ahọrọ usoro ikpo okwu kwesịrị ekwesị ị, anyị depụtara anyị n'elu 5 agbanwe kwupụta na njedebe nke peeji a. A na-achịkwa nhọrọ ọ bụla site na ozu dị elu site na gburugburu ụwa, dị ka FCA ASIC na CySEC.
Mgbe ịmechara nyocha wee chọta onye na-ere ahịa nke na-anabata ndị ahịa sitere n'akụkụ ụwa gị (dịka 5 anyị depụtara), ị nwere ike ịgbaso usoro anyị dị mfe iji bido.
Kwụpụ 1: Deba aha maka Akaụntụ
Tupu ịmalite, ọ ga-adị mkpa ka ị debanye aha na ụlọ ọrụ ahụ dị iche iche. Gaba na ukara website na kụrụ 'debanye' - ị ga-na-ahụ nke a na isi na peeji nke.
N’ebe a, ikwesiri inye aha mbụ na aha ikpeazụ, adreesị ụlọ, ụbọchị ọmụmụ, na ozi nkeonwe ndị ọzọ. Ga-ahọrọ otu aha njirimara na paswọọdụ pụrụ iche, na adreesị ozi-e.
Nzọụkwụ 2: Mata Onwe Gị
Anyị kọwara n'ihu peeji a banyere mkpa KYC - iwu siri ike nke usoro nhazi nyere. Ndị ahịa niile a ma ama ga-arịọ foto doro anya nke paspọtụ India, kaadị ID ma ọ bụ ikike ịkwọ ụgbọala.
Na-esote, onye na-ere ahịa ga-ajụ gị maka foto nke ụgwọ ma ọ bụ nkwupụta ụlọ akụ na nso nso a na aha gị na adreesị ya. Ohere inweta bụ na ị ga-aza ajụjụ ole na ole metụtara ọnọdụ ego gị dịka ahụmịhe azụmaahịa gara aga, ọnọdụ ọrụ na ụgwọ ọnwa.
Anyị agabigala nhọrọ nkwụnye ego kachasị dị, yabụ ugbu a, ị ga-ahọrọ usoro ịkwụ ụgwọ ịchọrọ iji, wee kwụọ ụgwọ akaụntụ azụmaahịa ọhụrụ gị.
Kwụpụ 4: Bido na ahia
Y’oburu n’ichoo ike iji banye n’ime mmiri ma malite ire ahia, inwere ike. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ mgbe ọ na-abịa ịzụ ahịa mgbe ahụ anyị na-akwado ịmalite site na obere ego, ma ọ bụ na-anwale akaụntụ ngosi ruo mgbe ị chere na ị dị njikere ịzụ ahịa na ezigbo ego.
Ndị na-ere ahịa kachasị mma nke 2021
Yabụ ugbu a ị matara maka usoro metrik niile ịchọrọ iji leba anya mgbe ị na-achọ ọchụchọ azụmaahịa India na-achịkwa, anyị chere na anyị ga-edekọ ndepụta nke ndị na-ere ahịa 5 kacha elu nke na-anabata ndị ahịa India.
1. EightCap - Azụmahịa karịrị 200 + Assets Commission-Free
2. Capital.com - Ntanetị Kọmịshọn na Mgbasa gbasara Ọla kọpa
3. AvaTrade - Ukwuu maka Ndị Mbido
AvaTrade bụ onye amaara ama nke ọma n'etiti ndị ahịa. A na-achịkwa saịtị ahụ n'ofe mpaghara 6 ma ị ga-enwe ohere ịnweta ọtụtụ ngwaọrụ dị ka Forex, ebuka, ndeksi, ngwaahịa, nhọrọ, ETFs, cryptocurrencies, na agbụ.
Nakwa inwe ihe karịrị otu puku akụ ịhọrọ, ikpo okwu a bụ ọrụ nwere ọtụtụ asụsụ yana asụsụ ndị ahịa 15. Y’oburu na ohuru iji ahia ahia, ihe ikpo okwu AvaTrade kpuchiela gi site na nzo ukwu uzo uzo esi agha ahia na ntanetị.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ngwa nke ya akpọrọ AvaTrade GO nke kwesiri ịlele. Ọ dị site na Google Play maka gam akporo na Storelọ Ahịa nke ndị ọrụ iOS. Ikpoko a na-akwadokwa MetaTrader4 nke di ukwuu maka nyocha oru.
AvaTrade Gaa ngwa
Nchịkọta nke nkuzi vidiyo nkuzi
6 usoro iwu nchịkwa
Agaghị akwụ ụgwọ ụgwọ
ndị ahịa na-adịghị ngwa ekwentị
4. EuropeFX - Commodity Trading Site Na Nnukwu Mmụta Ihe
India nwere onu ogugu mmadu ruru ijeri mmadu 1.4, mana o ruru ihe ruru nde iri abụọ na-ere ahịa. Nke ahụ kwuru, ọnụọgụ a toro ka ọ toro kemgbe a machibidoro mkpọchi n'ihi ọrịa zuru ụwa ọnụ COVID-20.
N'India, ọ bụ ndị SEBI na-achịkwa broka. Agbanyeghị, ahụ anaghị enye ikikere. N'ezie, ọ bụ na mmalite 90s ka enyere ụlọ ọrụ ahụ ikike ijikwa ahịa mgbanwe ngwaahịa.
Anyị ekwuola na ahia FX ego (na-enweghị nke nwere rupee) bụ iwu na-akwadoghị na ya mere ịta gị ahụhụ na India. Ma, ihe niile anaghị efu. Ọtụtụ ndị ahịa na India na-ahọrọ ịzụ ahịa site na ndị na-ere ahịa na ndị ama ama dị ka Skilling, eToro na AvaTrade.
Tupu ị họrọ onye na-ere ahia, na-eme nyocha ụfọdụ oge niile, gbaa mbọ hụ na ndị ọrụ gọọmentị na-achịkwa ikpo okwu ahụ, hụ na ha nabatara ndị ahịa India, ma na-enyocha ego na usoro.
SEBI bu aha achoro maka 'Securities and Exchange Board of India', aru a bu onye na achi achi ahia ego na India.
Gịnị kpatara m ji chọọ iji azụmaahịa a achịkwa?
A na-atụ aro ka ị na-emeso ndị na-ere ahịa na-achịkwa ahụ dịka FCA, ASIC, na CySEC wdg. Ihe kpatara ya bụ na a na-echekwa ego gị na akụkụ ndị a kachasị elu, ịghara ịkọwa ndị na-ere ahịa ga-agbaso iwu siri ike banyere nghọta na nlekọta ndị ahịa.
Kedụ ka m ga-esi mata na a na-achịkwa onye na-ere ahịa ya?
Ndị na-ere ahịa na-achịkwa aha ha na-eme ka ndebanye aha nke otu ahụ na-ahụ anya na ikpo okwu ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele, ị nwere ike ịga na weebụsaịtị nke usoro iwu ma lelee ụlọ ọrụ na reg nọmba.
Ndi ahia ahia ego di na India?
Ee - ọ bụrụ n ’ị na - azụkọ ahịa ụzọ abụọ na - agunyeghị rupee, ọ bụ mmejọ na - abụghị nke ịgba agba.
Enwere m ike ahia Forex na eToro na rupee ndị India?
Mba eToro na - enye gị ohere ịzụ ahịa na Dollar US, mana ozi ọma ahụ bụ na eToro na-anabata ndị ahịa si ebe 60 gburugburu ụwa, gụnyere India. Naanị ị ga-akwụ ụgwọ ego ntụgharị nke 0.5%.